Puntland Oo Marti Gelinaysa Shir Looga Hadlayo Arrimaha Dastuurka Soomaaliya | puntlandi.com
Puntland Oo Marti Gelinaysa Shir Looga Hadlayo Arrimaha Dastuurka Soomaaliya
Dawlada Federaalka Soomaaliya iyo dawaladaha Xubnaha ka ah, ayaa ka wada tashtay sidii dib-u-habayn loogu samayn lahaa Dastuurka Soomaaliya.
Kulamada ay dawlada Federaalka marti gelisay ayaa waxaa uu horu-dhac u yahay shirar kale oo la isugu iman doono, kuwaas oo loga hadlayo sidii Soomaaliya ay u heli lahayd Dastuur dhamaystiran, loogana guuri lahaa Dastuurka Kumeel gaarka ah.
Qorshaha dawlada Soomaaliya ayaa ah in muddo dhan labo sano ay kuso afmeerto Dastuurka sida lagu sheegay Warmuritiyeed kaso baxay shirkii Dastuurka looga hadlay ee Muqdisho lagu soo afmeeray.
Shirka xiga midkii lagu soo afmeeray magaalada Muqdisho, ayaa waxaa marti gelinaysa dawlada Puntland, waxaana uu ka dhici doona magaalada Garowe ee Caasimada Puntland.
Hoos Ka Akhriso Warmurtiyeedka Kaso baxy shirkii Muqdisho Lagu Soo Afmeeray;